Kubhuroka Mutemo | Law & More | Eindhoven & Amsterdam
Kubhuroka Mutemo muNetherlands
Kunetseka kuri kuitika kwemari uye mamwe mamiriro ezvinhu umo makambani asisakwanise kubhadhara ivo vanokweretesa, zvinogona kukonzera kambani kubhuroka. Kubhuroka kunogona kuve hope dzemanheru kune chero munhu anenge abatanidzwa. Kana kambani yako ine matambudziko emari, zvakakosha kuti ubate gurukota rezve insolvency. Kunyangwe iyo ine chekuita nechikumbiro chekubhuroka kana chidziviriro kubva pachirevo chekubhuroka, gweta redu rekubhuroka rinogona kukupa zano pane nzira yakanakira uye zano. Law & More inobatsira vatungamiriri, vanogoverana, vashandi uye vanokweretesa mapato vakapihwa mari yekubhadhara. Boka redu rinoedza kutora matanho kuitira kudzikisira mhedzisiro yekubhuroka.
UNGAVADA KUTI UGAMUZE ROPA REMAHARA?
ROPA KUSANGANA LAW & MORE
Kunetseka kuri kuitika kwemari uye mamwe mamiriro ezvinhu umo makambani asisakwanise kubhadhara ivo vanokweretesa, zvinogona kukonzera kambani kubhuroka. Kubhuroka kunogona kuve hope dzemanheru kune chero munhu anenge abatanidzwa. Kana kambani yako ine matambudziko emari, zvakakosha kuti ubate gurukota rezve insolvency. Kunyangwe iyo ine chekuita nechikumbiro chekubhuroka kana chidziviriro kubva pachirevo chekubhuroka, gweta redu rekubhuroka rinogona kukupa zano pane nzira yakanakira uye zano.
Law & More inobatsira vatungamiriri, vanogoverana, vashandi uye vanokweretesa mapato vakapihwa mari yekubhadhara. Boka redu rinoedza kutora matanho kuitira kudzikisira mhedzisiro yekubhuroka. Tinogona kuraira nezvekusvika pekugara nevanokweretesa, kugonesa kuendazve kana kubatsira munzira dzemutemo. Law & More inopa masevhisi anotevera maererano nekubhuroka:
• kupa zano maererano nekubhuroka kana deferment;
• kuita gadziriro nevanokweretesa;
• kugadzira kutangazve;
• kupa zano pachiremera chega chevatungamiriri, vanozogovana kana vamwe vanofarira.
• kufambisa matanho epamutemo;
• kunyorera kubhuroka kwevanokweretesa.
Kana iwe uri mukweretesi, tinogona kukubatsira iwe mukushandisa kodzero yekumiswa, kunyepa kana kuseta iyo iwe unofanirwa. Tinogona zvakare kukubatsira iwe mukumanikidza kodzero dzako dzekuchengetedza, sekukosheswa kwemhiko uye imba, kodzero yekuchengetwa kwemusoro, guaranteed ebhengi, kuchengetedza deposits kana zviito nekuda kwekubatana uye chikwereti.
Kana iwe uine chikwereti, tinogona kukubatsira iwe kupindura mibvunzo ine chekuita nekamusoro kwekuchengetedza kodzero uye dzakanangana nengozi. Tinogona zvakare kukupa zano pamusoro penzira iyo mukweretesi ane kodzero yekudzidzira dzimwe kodzero uye kukubatsira iwe muchiitiko chekutadza zvisizvo kwekodzero idzi.
Sekureva kweBankruptcy Act, mukweretesi anotarisira kuti haakwanise kubhadhara zvikwereti zvisati zvavapo. Izvi zvinoreva kuti anenge aine chikwereti anopihwa kunonoka kubhadhara. Iko kunonoka kunogona kungopihwa kune masangano epamutemo uye nevanhu vepanyama vanoita basa rakazvimirira kana bhizinesi. Zvakare, inogona chete kunyorerwa neakweretesa kana kambani pachayo. Icho chinangwa chekunonoka ndechekudzivirira kubhuroka uye kubvumira iyo kambani kuenderera mberi kuvapo. Referment inopa mukweretesi nguva nemukana wekuita bhizinesi rake muhurongwa. Mukuita, iyi sarudzo inowanzo kutungamira kune kuronga kwekubhadhara nevanokwereta. Referment saka inogona kupa mhinduro mune inozoitika yekubhuroka. Nekudaro, vanechikwereti havawanzo kubudirira mukuita bhizinesi ravo muhurongwa. Kunonoka kubhadhara saka kazhinji kunoonekwa senzira yekutanga kubhuroka.
Zvinoenderana neBankruptcy Act, mukweretesi, uyo ari mumamiriro ezvinhu aakatadza kubhadhara, achaziviswa kuti angave abhuroka nematare edzimhosva. Chinangwa chekubhuroka ndechekugovera zvinhu zvechikwereti pakati pevanokweretesa. Mukweretesi anogona kunge ari munhu akazvimiririra, senge munhuwo zvake, bhizinesi remunhu mumwe kana mubatanidzwa, asi zvakare chinzvimbo chepamutemo, chakadai seBV kana kuti NV Mukweretesi anogona kunzi haana kubhuroka kana paine vangangoita vaviri mukweretesi. .
Uyezve, chinguva chimwechete chikwereti chinofanirwa kunge chisina kubhadharwa, nepo chinofanira kunge chakadaro. Mune izvo, pane chikwereti chinonzi. Kubhuroka kunogona kumhan'arwa kune zvese mukuziviswa kwemunyori uye mukukumbira kwemumwe kana vazhinji vevakweretesi. Kana paine zvikonzero zvine chekuita neruzhinji, Hofisi yeMuchuchisi weParamende inogonazve faira rekubhanga.
Mushure mekuziviswa kwekubhuroka, bato rezve insolvent rinorasikirwa kuraswa uye manejimendi pazvinhu zvaro zviri zvebhangi. Iyo insolvent party haichazokwanisi kushandisa chero pesvedzero pane izvi zvinhu. Itirori ichagadzwa; uyu mutongi wematare anozobhadharwa manejimendi nekumisikidzwa kwenzvimbo ye insolvent estate. Iyo trustee saka ichafunga pane zvichaitika pamwe nezvinhu zvebhuroka. Zvinokwanisika kuti trustee inosvika pakuronga pamwe nevanokweretesa. Muchirevo chechinyorwa ichi, zvinogona kubvumwa kuti kanenge chikamu chechikwereti chavo chakabhadharwa. Kana chibvumirano chakadai chisingakwanisi kusvika, mutiririri anoenderera kuti apedze kubhuroka. Nzvimbo yacho ichatengeswa uye mari yacho ichagovaniswa pakati pevanokweretesa. Mushure mekugadziriswa, chinzvimbo chepamutemo chakaziviswa kuti chabhuroka chichaitwa chichaitwa.
Iwe unofanirwa kubata nemutemo wekudzvinyirira uye unoda here kuwana rubatsiro rwepamutemo? Ndokumbirawo mubate Law & More.